မုန့်သားအိအိလေးနဲ့ Pizza Maru ရဲ့ Screen Pizza ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?? | The Restaurant Guides for Myanmar
မုန့်သားအိအိလေးနဲ့ Pizza Maru ရဲ့ Screen Pizza ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ??
Pizza Maru ဆိုတာ အစားအသောက် ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ နာမည်ရှိပြီးသား ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး အရသာကကောင်းသလို စျေးနှုန်းကလည်း သင့်တော်တာကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ အခုသူ့ရဲ့ Screen Pizza လေးအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Pizzamaru ရဲ့ Screen Pizza က Pizza ဖုတ်တဲ့အခါမှာ ဇကာပေါက်နဲ့ခံပြီးပြုလုပ်တာမို့ ပိုနေတဲ့အဆီတွေကို စစ်‌ထုတ်ပေးပြီး ကိုလက်စထရော အနည်းဆုံးဖြစ်သွားလို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဖုတ်တဲ့အခါမှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ Dough qualityနဲ့ Pizza အရသာစစ်စစ်ရစေဖို့ အဆင့်တိုင်းမှာ Quality Control ကိုသေချာလုပ်ထားလို့ ပီဇာစစ်စစ်အရသာကို ခံစားရစေမှာပါ။
ဒါ့ပြင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ Bosung ဒေသ မှာ သေချာစိုက်ပျိုး ပြုလုပ်ထားပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ Green Tea dough ကိုအသုံးပြုထားလို့ အထူကြီးဖြစ်မနေပဲ သူ့ရဲ့ အရသာကလေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုပြီးတောင် ဖြစ်သွားပါဦးမယ်။
ပြီးတော့ ဘယ် Pizza ကိုပဲစားစား ရွေးချယ်စရာအများကြီးထဲက ရွေးလို့ရတဲ့အပြင် ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး toppings လေးတွေကိုပါ add on ထပ်ထည့်လို့လည်း ရသေးတော့ လုံးဝ Perfect ပဲ။ Korean Style Taste စစ်စစ်ကို အမိမိုက်ဆုံးအရသာနဲ့ ရနိုင်တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရနိုင်တဲ့ menu တွေကိုပဲပေးတဲ့ Pizza Maru က Pizza သရဲလေးတွေနဲ့ လုံးဝကွက်တိပါပဲ။